The OnePlus 5T nwere ike ịnwe igwefoto kachasị oke na ụlọ ọrụ ahụ | Gam akporosis
Mwepụta nke OnePlus 5T nwere ike ịbụ mbupute ikpeazụ ikpeazụ site na njedebe nke afọ a. Kwa ụbọchị, anyị na-enweta nkọwa ọhụụ banyere elu na-esote nke nso nke ndị China.
Dị ka Samsung ma ọ bụ Apple gosipụtara anyị ọtụtụ oge, nnukwu ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ na-arụ ọrụ ka njọ nke na-edebe ihe nzuzo nke ngwaahịa ha n'ọdịnihu. N'ihi nke a, ọ gaghị eju anyị anya na OnePlus 5T bụ isiokwu nke ọtụtụ ịkọ nkọ na oge a, nanị izu ole na ole mgbe ọmalitere ọrụ ya.
Ná mmalite nke izu a anyị natara "nkwenye" ​​na nso nso OnePlus 5T kwesịrị ịmalite a imewe na-enweghị akụkụ okpokolo agba, dị ka ọtụtụ n'ime ekwentị mkpanaaka dị elu nke afọ gara aga. Emechara ka ekwesiri ịkọwapụta ụdịdị a site na onyogho a na-ahụ n'elu, site na ikikere nke profaịlụ OnePlus na Twitter.
Ruo mgbe a ga-ekpughe ya na November ọzọ, OnePlus 5T apụtaworị na Portal benchmark AnTuTu. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịmepụta echiche na nhazi ngwaike nke ngwaọrụ.
Dị ka ọ dị na mbụ, ọ bụrụhaala na data esiteghị n'aka onye isi, a ga-atụle ya na ụfọdụ ịkọ nkọ, mana enwere ezigbo ohere na ọ bụ eziokwu.
Smartphonewa mbụ ama ama nwere kamera azụ 20-megapixel abụọ
O doro anya na, OnePlus 5T nwere ike ịbụ ama mbụ ụwa nwere igwe ese foto 20-megapixel abụọ. Dabere na AnTuTu post, were ya GizChina, o mechaa bia na a frameless ngosi na 18: 9 akụkụ ruru, ga- 8GB Ram na oghere ime ya ga-abụ 128GB. O yikarịrị ka ụdị nke nwere 6GB RAM na 64GB nke ebe nchekwa dị n'ime ga-apụta site na nha akara.
Ejiri OnePlus 5 mepụta afọ a site na iji kamera 16-megapixel abụọ. Ọ bụrụ na ọ ga - eweta ihe mmetụta abụọ nke 20 megapixels ọ bụla, ewezuga eziokwu nke inwe ike ịse foto dị elu, nke a ga - anọchite anya eziokwu a na - enwetụbeghị ụdị ya na ụlọ ọrụ ahụ. Na mgbakwunye, ọ nwere ezigbo ohere ịbịarute gam akporo 8.0 Oreo tinyegodi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus » Onye OnePlus 5T nwere ike inwe igwefoto kachasị oke na ụlọ ọrụ ahụ
Ọfọn, ọ bụrụ na etinyere ejiji nke 18: 9 ihu, ha dị oke mma, m nọ n'azụ Blackview S8 na n'oge a dị oke mma, ọ bidola akwụkwọ ikike ya maka € 127, maka ihe ọ na-enye, ọ bụ ihe a na-apụghị imeri emeri. .
Xiaomi mara ọkwa ụbọchị mmeghe nke weebụsaịtị Spanish
Ọnụahịa nke smartphones anyị arịgoro 7% afọ a